I-20,000 yeetoni yecomputer yemveliso yesichumiso-YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Umgca wemveliso yonyaka weetoni ezingama-20,000 zesichumisi esidityanisiweyo yindibaniselwano yezixhobo eziphambili. Iindleko eziphantsi zokuvelisa kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso. Imveliso yemveliso yesichumiso ingasetyenziselwa i-granulation yezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Okokugqibela, izichumisi ezihlanganisiweyo ezinee-concentrations ezahlukeneyo kunye neefomula zinokulungiswa ngokweemfuno zokwenyani, zizalise ngokufanelekileyo izondlo ezifunekayo kwizityalo, kwaye zisombulule ukungqubana phakathi kwemfuno yesityalo kunye nonikezelo lomhlaba.
Umgca wemveliso yezichumiso ezidityanisiweyo unokuvelisa isichumiso esiphakamileyo, esiphakathi kunye nesisezantsi esidityanisiweyo kwizityalo ezahlukeneyo. Umgca wemveliso awudingi ukuba womile, notyalo-mali oluncinci kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi.
Isondo lomtya wemveliso yezichumiso ezidityanisiweyo zinokuyilwa ngokweemilo ezahlukeneyo kunye nobungakanani ukuze ucudise kwaye uvelise amasuntswana obukhulu obahlukeneyo.
Umgca wemveliso yesichumiso esidityanisiweyo ineempawu zokusetyenziswa kwamandla asezantsi, amandla emveliso amakhulu kunye nezibonelelo ezilungileyo zoqoqosho.
2. Imveliso yemveliso isebenzisa i-granulation eyomileyo, ishenxisa inkqubo yokupholisa yokomisa kwaye inciphise kakhulu igalelo lezixhobo.
3. Umgca wemveliso yezichumiso ezixandileyo uyalingana kwaye unengqiqo, ugubungela indawo encinci.
4. Kwinkqubo yemveliso, kuncinci ukusetyenziswa kwamandla kwaye akukho nkunkuma zintathu. Umgca wemveliso yezichumiso ezidibeneyo unentsebenzo ezinzileyo, umgangatho onokuthenjwa kunye nobomi benkonzo ende.
5. Umgca wemveliso yesichumiso somgquba ungasetyenziselwa ukuvelisa izinto ezahlukeneyo zecompany. Kwaye izinga legranulation liphezulu ngokwaneleyo.
6. Umgca wemveliso yesichumiso esingaxutywanga unokuvelisa isichumisi esimbaxa kwiindawo ezahlukileyo ukufezekisa iimfuno zabathengi abohlukeneyo.
Ukuthetha nje ngokubanzi, umgca wemveliso yezichumiso ezidityanisiweyo ngokubanzi unala macandelo alandelayo: inkqubo yokuxuba, inkqubo yegranulation, inkqubo yokutyunyuzwa, inkqubo yovavanyo, inkqubo yokutyabeka kunye nenkqubo yokupakisha.
1. Umatshini wokuBamba oDlamkileyo:
Izinto ezingaphezulu kwesithathu zinokwenziwa. Umatshini wokubambisa uneesilos ezingaphezu kwesithathu, kwaye unokunyusa ngokufanelekileyo kwaye anciphise isisele ngokweemfuno zabathengi. Ekuphumeni kwesisele ngasinye, kukho umnyango we-elektroniki womoya. Ngaphantsi kwesilo, ibizwa ngokuba yi-hopper, nto leyo ethetha ukuba emazantsi e-hopper sisiphatho sebhanti. Kuyatshiwo ukuba i-hopper kunye nebhanti yokuhambisa ixhonywe kwelinye icala lokuhambisa lever, elinye icala lever liqhagamshelene ne-tension sensor, kwaye inzwa kunye nenxalenye yolawulo lwomoya zixhunyiwe kwikhompyuter. Lo matshini wamkela ubunzima bokunyuka kwesikali se-elektroniki, esilawulwa ngokuzenzekelayo sisilawuli sokubambisa, kwaye umlinganiso wobunzima bento nganye ugqityiwe ngokulandelelana. Inezibonelelo zesakhiwo esilula, ukuchaneka kwezithako eziphezulu, ukusebenza okulula kunye nokusetyenziswa okuthembekileyo.
2. Nkqo Chain isityumzi:
Dibanisa izinto ezahlukeneyo edityanisiweyo kwindawo ethile uze uzibeke isityumzi nkqo chain. Imathiriyeli ekrwada iya kutyunyuzwa ibe ngamasuntswana amancinci ukuhlangabezana neemfuno zenkqubo yegranulation elandelayo.
3. Nkqo yedisk feeder:
Emva kokuba izinto ezingafunekiyo zityunyuziwe, ithunyelwa kwi-nkqo kwi-feeder yediski, kwaye izinto ekrwada zixutywe kwaye zanyanzeliswa ngokulinganayo kumxube. Ukufakwa ngaphakathi komxube yipolypropylene okanye ipleyiti yentsimbi engenasici. Izinto eziluhlaza ezinomhlwa ophezulu kunye ne-viscosity akukho lula ukunamathela kuzo. Izinto ezixubekileyo ziya kungena kwi-drum granulator.
4.Qengqa i-extrusion Granulator:
Ukwamkela iteknoloji ye-extrusion eyomileyo, inkqubo yokumisa ishiyiwe. Ixhomekeka ikakhulu kuxinzelelo lwangaphandle, ukuze loo nto inyanzeliswe ukuba icinezelwe kwizicucu ngezixhobo ezibonisa umva. Ukuxinana okwenyani kwezinto kunokunyuka ngamaxesha e-1.5-3, ngaloo ndlela kufikelelwa kumgangatho othile wamandla. Ingakumbi zilungele iindawo zokunyusa ubunzima bomkhiqizo. Umsebenzi wokuqina kunye nohlu olubanzi lokuziqhelanisa kunokulungiswa ngoxinzelelo lolwelo. Izixhobo ayisiyenzululwazi kuphela kwaye inengqiqo kulwakhiwo, kodwa ikwanalo notyalo-mali oluncinci, ifuthe elikhawulezileyo kunye nezibonelelo ezilungileyo zoqoqosho.
Isetyenziselwa ukwahlula imveliso egqityiweyo kwizinto ezisetyenzisiweyo. Emva kokucoca, amasuntswana afanelekileyo afakwa kumatshini osongelayo, kwaye amasuntswana angafanelekanga afakwa kwi-crusher ethe nkqo yokwenza kwakhona igranulated, oko ke kukuqonda ukuhlelwa kwemveliso kunye nokuhlelwa okufanayo kwemveliso egqityiweyo. Lo matshini wamkela isikrini esidityanelweyo ukuze kube lula ukugcinwa kunye nokutshintshwa. Ubume bayo bulula kwaye bujijile. Umsebenzi olula kunye nozinzo sisixhobo esibalulekileyo kwimveliso yesichumiso.
6.Umatshini wokuPakisha oBanzi we-Elektroniki:
Emva kokuba amasuntswana ehloliwe, afakwa kumatshini wokupakisha. Umatshini wokupakisha unezinga eliphezulu lokuzenzekelayo, ukudibanisa ubunzima, umthungo, ukupakisha kunye nokuhamba, okuqonda ukupakisha okukhawulezayo kwaye kwenza inkqubo yokupakisha isebenze ngakumbi kwaye ichaneke.
7. Ibhanti yokuhambisa: